UGary Ruskin, Umbhali wase-US Ilungelo lokwazi
umbhali: UGary Ruskin
ezaposwa ngomhla Februwari 26, 2021 by UGary Ruskin
Le bhlog ngu UStacy Malkan ihlaziywa rhoqo ngeendaba kunye neengcebiso malunga neBill Gates kunye neenzame zophuhliso lwezolimo zeGates Foundation kunye nefuthe lezopolitiko kwiinkqubo zokutya zehlabathi. Kutheni le nto silandela iiGates? Funda iposti yethu. Kwaye nceda ubhalisele i incwadana yethu uhlaziyo rhoqo.
IBill Gates yokuKhangela ukutya, GMO, Uphando lwethu, Pesticides
ezaposwa ngomhla Septemba 23, 2020 by UGary Ruskin
Izifo ezinxulumene nokutya, Pesticides
ezaposwa ngomhla Septemba 10, 2020 by UGary Ruskin
Ukukhutshwa kwangoko: Lwesine, Septemba 10, 2020
Ngolwazi oluthe kratya: Gary Ruskin (415) 944-7350
IntoniInkundla ePhakamileyo yaseVermont iya kuva iingxoxo zomlomo e-US Right to Know v. University of Vermont. Eli tyala libandakanya isicelo phantsi komthetho iVermont Public Records Act wonxibelelwano lwe-imeyile olubandakanya uGqirha uNaomi Fukagawa, unjingalwazi ophuma kwezamayeza kwiYunivesithi yaseVermont. I-USRTK inomdla wokufunda ngakumbi ngomsebenzi kaFukagawa njengomhleli oyintloko woPhononongo lwezeMpilo. Ijenali ipapashwe ngu IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi (ILSI), iqela elixhaswa ngemali ngamashishini okutya kunye nezolimo.
NiniNgoLwesibini, nge-15 kaSeptemba ngo-2pm EDT. Ividiyo yeengxoxo zomlomo iya kusasazeka ngqo kwi: https://www.youtube.com/channel/UCx5naSorUsDA-rgrF1_SGkw
NgobaI-US Ilungelo lokwazi iqhuba uphando olubanzi malunga nokutya kunye nemizi-mveliso yezolimo, ushishino lwabo kunye namaqela angaphambili. Ngenxa yolo phando, uMlawuli oLawulayo wase-US uGary Ruskin ubhale izifundo ezintathu ezimalunga ne-ILSI kwiijenali. Nondlo lweMpilo kaRhulumente, Ubumbano kunye neMpilo kwaye Impilo yoLuntu ebalulekileyo. Izifundo zibonisa ukuba ngelixa i-ILSI ibanga ukuba "iphucula intlalontle yoluntu ngokubanzi," eneneni isebenza egameni lokutya.
imvelaphiI-USRTK ilungiselele i iphepha elichazayo malunga ne-ILSI. Amagqabantshintshi kwityala lase-US Ilungelo lokwazi v. IYunivesithi yaseVermont zezi ezikhoyo apha.
Ukukhutshwa kweendaba, Uphando lwethu
ezaposwa ngomhla Agasti 3, 2020 by UGary Ruskin
Ukukhululwa kwangoko: NgoMvulo, Agasti 3rd 2020 kwi-11am EDT
Ukuqhagamshelana Nolwazi: UGary Ruskin + 1 415 944 7350
I-Coca-Cola igcinwe "I-imeyile yoSapho" yamaZiko aDibeneyo eMpilo kaRhulumente
I-Coca-Cola Co kunye nabahlohli beqela eliphambili kwi-Global Energy Balance Network (GEBN) bazamile ukuyifihla indima ephambili yeCoke kunye nenkxaso mali yeqela, ngokuka isifundo esitsha papashwe namhlanje Nondlo lweMpilo kaRhulumente. UCoke kunye nabahlohli bazamile ukunciphisa ubungakanani be-Coke's 1.5 yezigidi zeedola kunye nendima yenkampani ekwenziweni kwe-GEBN. I-Coke ikwagcina "usapho lwe-imeyile" lwabahlohli bezempilo boluntu uCoke wayesebenzisa ukukhuthaza umdla wayo.
Olu phononongo lwalusekwe kumaxwebhu afunyenwe kusetyenziswa iirekhodi zikarhulumente nge-US Right to Know, uphando kwezempilo yoluntu kunye neqela labathengi. I-Coke yenze i-GEBN ukuba ibeke ezantsi amakhonkco phakathi kokutyeba kakhulu kunye neziselo ezineswekile, njengenxalenye yayo "Imfazwe" kunye noluntu lwempilo yoluntu. I-GEBN iphelile ngo-2015.
"Eli libali lendlela uCoke asebenzise ngayo izifundiswa zempilo yoluntu ukwenza amaqhinga ecuba okutshaya ukukhusela ingeniso yawo," utshilo uGary Ruskin, umlawuli olawulayo we-US Right to Know. "Yindawo ephantsi kwimbali yezempilo yoluntu, kunye nesilumkiso malunga neengozi zokwamkelwa kwenkxaso-mali yeziko kwimisebenzi yezempilo yoluntu."
Ngokubhekisele kwinkxaso mali kaCoke, uJohn Peters, unjingalwazi kwezamayeza kwiYunivesithi yaseColorado, kuchazwe“Ngokuqinisekileyo kuza kufuneka siyixele le mali [yeCoca-Cola] ngaxa lithile. Eyona nto singathanda ukuyikhetha kukuba sibe nabanye abaxhasi ngaphambili… Kanye ngoku, sinabaxhasi ababini. Coca Cola kunye nomntu ongaziwayo ukuba unikele… .UJim [Hill] noSteve [Blair], ingaba iyabandakanya neeYunivesithi njengabaxhasi / ngabaxhasi abaphumeleleyo kuvavanyo lobuso obomvu? ”
Kwenye imeyile, UJohn Peters uyacacisa"Silawula eminye imibuzo ye-GEBN kwaye ngelixa sichaza iCoke njengomxhasi asifuni kuxela ukuba banike malini."
Eli phepha likwabonelela ngobunkokheli bukaCoke beqela elihlangeneyo labahlohli bezempilo bakhuphe uphando kunye nemiyalezo yobudlelwane noluntu exhasa uCoke. URhona Applebaum, owayengu-VP ngelo xesha kunye negosa eliyintloko lezenzululwazi kunye nezempilo eCoke, basebenzisa igama elithi “usapho lwe-imeyileUkuchaza inethiwekhi. Eli phepha lithi, “uCoca-Cola uxhase uthungelwano lwezifundo, njenge 'ntsapho ye-imeyile' ekhuthaza imiyalezo enxulumene nesicwangciso-qhinga sobudlelwane noluntu, kwaye ifuna ukuxhasa abo bahlohli ekuqhubeleni phambili imisebenzi yabo nokwakha amaziko abo ezempilo kunye namaziko onyango . ”
"Usapho lwe-imeyile" lweCoke ngumzekelo nje wakutshanje wentengiso eyoyikisayo eyunivesithi kunye nomsebenzi wezempilo, "utshilo uRuskin. "Abahlohli bezempilo yoluntu kusapho lwe-imeyile neCoke bafana nabaphuli mthetho kusapho lwe-imeyile kunye no-Al Capone."
Isifundo sanamhlanje kwiZempilo kaRhulumente Isondlo sithi "Ukuvavanya iinzame zikaCoca-Cola zokuphembelela impilo yoluntu 'ngamazwi abo': uhlalutyo lwee-imeyile zeCoca-Cola kunye nabahlohli bezempilo bakarhulumente abakhokela iGlobal Energy Balance Network." Kwabhalwa ngokubambisana nguPaulo Serôdio, uphando naye kwiYunivesithi yaseBarcelona; UGary Ruskin, umlawuli olawulayo wase-US Ilungelo Lokwazi; UMartin McKee, uprofesa wezempilo yoluntu waseYurophu, iSikolo saseLondon seMpilo kunye neTropical Medicine; noDavid Stuckler, uprofesa kwiYunivesithi yaseBocconi.
Ababhali ngokuhlangeneyo besifundo sanamhlanje nabo babhale isifundo malunga neCoke kunye ne-GEBN yeJenali ye-Epidemiology kunye neMpilo yoLuntu ebizwa ngokuba "Imibutho yezenzululwazi kunye 'nemfazwe' kaCoca-Cola kunye noluntu lwempilo yoluntu: ukuqonda okuvela kuxwebhu lweshishini lwangaphakathi. "
Amaxwebhu avela kolu phononongo ayafumaneka kwi-UCSF yoGcino lweeNkcukacha zoKutya, e-US Ilungelo Lokwazi Ukuqokelelwa Kweshishini Lokutya, https://www.industrydocuments.ucsf.edu/food/collections/usrtk-food-industry-collection/.
Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-US Right to Know, bona amaphepha ethu ezifundo https://usrtk.org/academic-work/. Ngolwazi oluthe kratya, yabona usrtk.org.
Umsebenzi wezifundo, Ukukhutshwa kweendaba
ezaposwa ngomhla Ngamana 17, 2020 by UGary Ruskin
Ukukhululwa kwangoko: NgeCawa, nge-17 kaMeyith 2020 ngo-8pm EDT
Iqela elinamandla elingenzi nzuzo kwihlabathi liphela iZiko lezeNzululwazi ngezoBomi (i-ILSI) lithi injongo yalo “kukuphucula impilo yoluntu ngokubanzi,” kodwa Uphando lupapashwe namhlanje kwiZempilo kaRhulumente yongeza ubungqina bokuba, eneneni, liqela eliphambili lokutya.
Uphononongo, ngokusekwe kumaxwebhu afunyenwe lilungelo laseMelika laseMelika ngokucela izicelo zerekhodi zikarhulumente, kwafunyanwa "ipateni yomsebenzi apho i-ILSI ifuna ukuxhaphaza ukuthembeka kwezazinzulu kunye nezifundiswa ukomeleza izikhundla zeshishini kunye nokukhuthaza umxholo owenziwe lishishini kwiintlanganiso zayo, Ijenali nezinye izinto. ”
"I-ILSI inobuqhophololo kuba ithi basebenzela impilo xa bekhusela ishishini lokutya kunye neenzuzo zalo," utshilo uGary Ruskin, umlawuli olawulayo we-US Right to Know, umthengi kunye neqela lezempilo loluntu. "Kuwo wonke umhlaba, i-ILSI isembindini wokukhuselwa kwemveliso yokutya, ukugcina abathengi bethenga ukutya okugqityiweyo, iziselo ezineswekile kunye nokunye ukutya okungenamsoco okukhuthaza ukutyeba, uhlobo lweswekile 2 nezinye izifo."
Isifundo sivelisa indlela i-ILSI ekhuthaza ngayo umdla wokutya kunye nemizi-mveliso yezolimo, kubandakanya:
Indima ye-ILSI ekukhuseleni izithako zokutya ezinempikiswano kunye noxinzelelo lweembono ezingathandekiyo kushishino;
ukuba iinkampani ezinje ngeCoca-Cola zinokuthi zibeke igalelo kwi-ILSI kwiinkqubo ezithile; kwaye,
indlela i-ILSI ebasebenzisa ngayo abafundi kwiziphathamandla zabo kodwa ivumela imboni ifihlwe kwimpapasho yabo.
Kolu phando, ababhali-kunye "babiza i-ILSI ukuba yamkelwe njengecandelo labucala endaweni yeziko elizimeleyo elingenzi nzuzo."
Uphononongo lukwaveza iinkcukacha ezintsha malunga nokuba zeziphi iinkampani ezixhasa i-ILSI kunye namasebe ayo. Umzekelo:
Idrafti ye-ILSI yaseMntla Melika ye-2016 IRS form 990 ibonisa igalelo le- $ 317,827 elivela kwaPepsiCo, igalelo elingaphezulu kweedola ezingama-200,000 ezivela eMars, eCoca-Cola naseMondelez, kunye negalelo elingaphezulu kwe- $ 100,000 kwiGeneral Mills, Nestle, Kellogg, Hershey, Kraft, Dr. Pepper Snapple Group , I-Starbucks Ikofu, iCargill, i-Unilever kunye ne-Campbell Soup.
Idrafti ye-ILSI yenkonzo yangaphakathi yeNgeniso ye-Revenue 2013 ibonisa ukuba ifumene i-990 yeedola kwiCoca-Cola, nangaphezulu kwe- $ 337,000 nganye eMonsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Pioneer Hi-Bred, Bayer Crop Science kunye ne-BASF.
Kwi-2012, i-ILSI ifumene i-528,500 yeedola kwimirhumo evela kwiCropLife International, igalelo lama- $ 500,000 elivela eMonsanto, kunye ne- $ 163,500 kwiCoca-Cola.
Kutshanje, kuye kwakho umsebenzi wophando kwi-ILSI kunye nefuthe layo kwihlabathi liphela. KuJanuwari ophelileyo, amaphepha amabini nguNjingalwazi waseHarvard uSusan Greenhalgh, kwi BMJ kwaye i Ijenali yoMgaqo-nkqubo weMpilo kaRhulumente, ityhile impembelelo ye-ILSI kurhulumente wase-China malunga nemicimbi enxulumene nokukhuluphala. NgoJuni ophelileyo, ababhali-mbumbulu bophando lwanamhlanje bakhuphe Isifundo sangaphambili kwi-ILSI kwiphephancwadi iGlobalization kunye neMpilo. NgoSeptemba ophelileyo, iNew York Times yapapasha inqaku malunga ne-ILSI, enesihloko IQela leShishini eliLuhlaza lenza iMilo yomgaqo-nkqubo wokutya kwihlabathi liphela. Ngo-Epreli, ukungaziphathi kakuhle kweZiko kukhuphe ingxelo malunga ne-ILSI enesihloko “Ubuhlakani bePlanethi engenampilo. "
I-ILSI ibandakanyiwe njenge-501 (c) (3) umbutho ongenzi nzuzo, ozinze eWashington DC. Yayisungulwa kwi-1978 ngu-Alex Malaspina, owayesakuba ngusekela mongameli omkhulu weCoca-Cola. Inamasebe ali-17 abekwe kwihlabathi liphela.
Isihloko sophononongo kwiZempilo yezeMpilo kaRhulumente sithi “Ukutyhala ubuhlakani: ifuthe lokudibana kophando kunye nomgaqo-nkqubo ngokusebenzisa iZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi. ” Kwabhalwa ngokubambisana nguSarah Steele, umlingani ophando ophezulu kwiKholeji kaYesu nakwiYunivesithi yaseCambridge; UGary Ruskin, umlawuli olawulayo wase-US Ilungelo Lokwazi; kwaye, UDavid Stuckler, uprofesa kwiYunivesithi yaseBocconi.
Amaxwebhu asuka kolu phando ayafumaneka kwi- Uvimba-maxwebhu amaShishini okuTya ye Ithala Leencwadi lamaxwebhu e-UCSF, kwi Ingqokelela yeUSRTK yoShishino lokutya, kunye ne Uvimba-mpepha wamaXwebhu oShishino lweMichiza, kwi Ingqokelela yezoLimo zeUSRTK.
Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-ILSI, bona Iphepha leLungelo laseMelika lase-US ngayo. Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-US Right to Know, bona amaphepha ethu ezifundo https://usrtk.org/academic-work/. Ngolwazi oluthe kratya, yabona usrtk.org.
ezaposwa ngomhla Disemba 18, 2019 by UGary Ruskin
Ukukhutshwa kwangoko: NgoLwesithathu, nge-18 kaDisemba, 2019
Ngolwazi oluthe kratya: Gary Ruskin, +1 415 944-7350
Amaxwebhu angaphakathi eNkampani yeCoca-Cola abonisa ukuba le nkampani ijonge ukusebenzisa imikhankaso yobudlelwane noluntu ukuphembelela ulutsha ukuba lube semngciphekweni weemveliso zalo, kubandakanya isoda eneswekile, ngokophando olupapashwe namhlanje kwiJenali yaMazwe ngaMazwe yoPhando lwezeNdalo kunye neMpilo yoLuntu.
inye Coca-Cola uxwebhu ibonisa ukuba iinjongo zayo zomkhankaso wobudlelwane noluntu zibandakanya "Ukonyusa amanqaku ezempilo e-Coke kunye nolutsha" kunye "nokuthembeka kwesamente kwimpilo nakwintlalo-ntle."
Isifundo siveliswe yiDyakin University yase-Australia kunye ne-US Right to Know, umthengi ongenzi nzuzo kunye neqela lezempilo loluntu. Isekwe kwiinkampani ezimbini zeCoca-Cola izicelo zobudlelwane noluntu kwizindululo Imidlalo yeOlimpiki yeHlabathi yeRio 2016 kwaye ngenxa yayo Intshukumo Iphulo lolonwabo. Ilungelo lase-US lokuFumana la maxwebhu kusetyenziswa izicelo zerekhodi zikarhulumente.
"Amaxwebhu abonisa ukuba uCoca-Cola wazama ukusebenzisa ubudlelwane boluntu ukukhohlisa ulutsha ekucingeni ukuba isoda eneswekile iphilile, xa inyusa umngcipheko wokutyeba kakhulu, isifo seswekile kunye nezinye izigulo," utshilo uGary Ruskin, umbhali-mbhali wesifundo , Kunye nomphathi-mlawuli we-US Right to Know. "Iinkampani zecuba akufuneki zixelele abakwishumi elivisayo ukuba ziziphi na izinto ezingenampilo, ngokunjalo neCoca-Cola."
"Simemelela oorhulumente kunye neearhente zempilo yoluntu ukuba ziphande ngendlela uCoca-Cola asebenzisa ngayo ubudlelwane boluntu ukuphatha abantwana nolutsha ngeendlela ezinokuthi zonakalise impilo yabo," utshilo uRuskin.
Uphononongo luqukumbela ngelithi, "Injongo kaCoke kunye nokukwazi kwakhe ukusebenzisa imikhankaso ye-PR kwintengiso kubantwana kufanele kubangele inkxalabo enkulu yezempilo yoluntu, ngenxa yokuba ukubonakaliswa kwabantwana kwintengiso yokutya okungenampilo kunokuba negalelo elibalulekileyo ekwandiseni izinga lokutyeba kwabantwana. . ”
“Kumhlaba jikelele, iCoke yenza izithembiso eluntwini zokunciphisa ukubhejiswa kwabantwana kwintengiso yeemveliso ezingenampilo. Kodwa into abayithethayo esidlangalaleni iyaphikisana namaxwebhu abo angaphakathi abonisa indlela abazimisele ngayo ngabom ukujolisa abantwana njengenxalenye yemizamo yabo yokunyusa ”, utshilo umbhali-mbhali wolu phando, uNjingalwazi oManyeneyo uGary Sacks osuka kwiDyunivesithi yaseDeakin.
Isifundo kwiJenali yaMazwe ngaMazwe yoPhando lwezeNdalo kunye neMpilo yoLuntu yabhalwa nguBenjamin Wood, umfundi wobugqirha kwiDyunivesithi yaseDeakin; UGary Ruskin, umlawuli-kunye we-US Right to Know, kunye neDyunivesithi yaseDeakin enguNjingalwazi uGary Sacks.
The isitshixo amaxwebhu ezivela kufundo ziyafumaneka kwi Uvimba-maxwebhu amaShishini okuTya ye Ithala Leencwadi lamaxwebhu e-UCSF, kwi Ingqokelela yeUSRTK yoShishino lokutya.
Umsebenzi wezifundo, Izifo ezinxulumene nokutya, UkuThengiswa kwaBantwana, Ukukhutshwa kweendaba, Uphando lwethu, Abangcamli